Al Shabaab: Waallidii Sayid Qutub | Qaranimo Online
Al Shabaab: Waallidii Sayid Qutub
October 28, 2013 | Filed under: Warka Maanta | Posted by: QOL Admin Soomaalidu waxay ka mid tahay isirrada dunida ugu fac weyn oo Geesta Afrika ku nool. Laba milyan oo gu’aad ayaa aadmigii ugu horreeyay ka faafay Geeska Afrika waxaa se ilbaxnimada aadmigu hanaqaadday tobankii kun ee gu’aad ee u dambeeyay. Waxay Soomaalidu tobankaas kun ee gu’aad xiriir la soo yeelatay guud ahaantood isirrada dunida. Tusaale ahaan xiriirkii ay la lahayd Masaaridii Hore shan kun oo gu’aad ka hor ayaa sooyaallay in ka badan afar kun oo gu’aad. Waxay Soomaaliya ku magac dheerayd “Dhulkii Gabayda.” Ilbaxnimadii waayihii hore, farsamada iyo aqoonta cusub ka hor, aqoonwadaaggii aadmiga waxaa kaalin weyn ku lahaa badmaaxeyaal qaaradaha u kala goosha. Qaabkaas ayaa dadka dega xeebaha u qaabbilay shisheeye waageeni ah oo dadka gudaha sii jira aan haleelin. Saan waxaa ku dhalan jiray saamayn kala duwan oo dhaqameed, diimeed, afeed, iwm. Sidaas ayaa qolo ba qolo u saan duwi jirtay. Dadyowga adduunku waa laba; saameeye iyo saameysane. Saameysanuhu dookh ma lahayn badanaa oo inta loo yimaado ayaa loo loogi jiray isbeddel buuxa, haddii xumaan iyo waxyeello isbeddelku dheehan yahay ama haddii uu wanaag iyo samaan ballaysimay inta ba. Arrintaan ayaa daaha ka rogaysa waxyaalo badan oo Soomaalida ku saabsan oo lagu gorfayn karaa waxa ka qaldan iyo waxa u suubban ee ku aaddan baxdadii hore, joogtada maantoole iyo timaaddada berritoole.
Isweydaarsigii Soomaaliya la yeelatay Turkigii, Shiinihii, Boortoqiiskii, Hindidii, Baarshiyaankii, Carabtii, Yurubiyaankii iyo Afrikada kale ayaa waxaa ugu waayo dheera ama ugu saameyn ballaarnaa kii Carbeed oo baallobaxsaday wixii ka dambeeyey faafkii diinta Islaamka. Waxaa loogu yeeri karaa isbeddel Soomaali soo maray kii ugu weynaa oo gebi ahaan saan duway oo teer iyo maanta aawan. Tusaale ahaan waxbarashada ugu horraysa ee Soomaaligu dugsi quraanka ayay ka bilaabataa, waxa uu kala kulmaa hab feker qaabeeyay aragtidiisa nolosha adduunka. Isbeddelkaanu waxa uu saaqay wadnaha iyo dhiigwadeennada qofeed iyo bulsheed ee dadka Soomaaliyeed. Meel kasta oo uu qof Soomaaliyeed ku nool yahay waxaa hubaal ah in uu astaan Carbeed xambaarsan yahay oo mid Soomaaliyeed waa’ hore ka suulay. Waa culays tan weyn. Dhaawaca saameyntii Carbeed yeeshay dadka Soomaaliyeed waxaa haatan ka dhashay ficillo Soomaaliyi ab iyo isir u lahayn oo ay ka mid yihiin isgorwac iyo isqarxin. Haddii awal sheekadu ahayd Afrikaan ismooday Carab ama dad sooyaalkoodii la beddelay, haatan waxaa yimid waxyaalo la soo faagay oo ay la yimaadeen gardheereyaal rumaysan in Soomaalidu qalloocan tahay oo toosin u baahan tahay oo lagu toosin karo keliya burburinta dhaqan Soomaaliyeedka iyo Carabaynta ummadda. Ururka argaggixisada ah ee Al Shabaab ayaa qof walba jeegada la xoqday halka waxaanu ka yimaadeen ama run ku noqon karaan ama aragtidaanu ka fidday. Waa mad-hab ay dhiiqday maskaxda dhimir laawe jirran, waa tii tigaantig xumihii Sayid Qutub oo qoraaga ahaa oo bartimihii qarnigii la sagoontiyay qoray dhigaallo uu ugu talogalay taageereyaashiisii faro-ku-tiriska ahaa.
Sayid Qutub waxaa uu ahaa qoraa u dhashay Masar oo ku caanbaxay keli toocsi ama gooni ahaansho. Qoraal ba qoraal ayuu kaga sarreysiisay. Qofka buuggiisa akhriya aad ayuu u dhiillo gelin jiray. Waxqorka, akhriska iyo barashada maadooyiinka ayuu aad iyo aad ugu dheeraa oo yaraantiisii – saaxiib la’aan iyo maaweelo la’aan ba – ku dhammaayey oo guddoomay qoreyaashii ugu doorka roonaa waayihiisii. Sheekooyinkiisii male-awaalka oo gabayada iyo maaweelada ku salaysnaa ayaa lagu faafshay guud ahaan haykalka waxbarasho ee Masar oo uu ku kasbaday meeqaam sare. Jago sare oo wasaaradda waxabarasha ah ayaa lagu bilay. Haseyeeshee wuxuu hay’adihii waxbarasho ku dhaliilay barashada Quraanka keliya iyo ka-gaabinta maadooyinka kale ee aqoonta cusub oo dalka lagu horrumarin karay.
Muddo dabadeed Sayid Qutub waxaa loo diray Maraykanka si uu ugu kuurgalo qaabka waxbarashada dalkaas. Dhaqankii Maraykanka iyo midab takoorkii ka jiray ayuu ku weyraxay oo qaadsiiyay walaahoow maskaxweed. Imaatinkii dalkaas ayaa bilbilay oo aydin ku taagay oo bannaanka soo dhigay uur-ku-hays ba’an oo holcaysay; buufis, isla-hadal iyo cudurro la garan waayey ayaa jaangooyay dhuyaalkii waxbarasho oo ku kalliftay in uu dib ugu laabto Masar. Dareen-larkii ayaa nacayb aan maan fiyoow ka soo go’i karin ku abuuray, Maraykan ayuu u arkay meel adduun gaddoon ka soo socdo, taas oo la talantaalliday in uu isu tusay mudnaanta waajibaad uu dadka iyo dalka Masar uga digo dhaqanka fasahaadka ah ee Maraykanka. Markii uu Masar ku soo laabtay se meeshii uu qaddar sare maamuusnaa, wuxuu u muuqday qof waashay, oo hanan waayay shaqo uu nolol maalmeedda ku kabto. Muddo ka dib waxaa hawl geliyey ururkii Walaalaha Muslimiinta oo u magacaabay tafatiraha wargeys toddobaadle ahaa ee ururkaas si uu dadweynaha uga iibiyo mabaaddiidii ururka, wuxuu mutay xubin sare oo ku lammaan golaha sare ee Walaalaha Muslimiinta.
Dawladdii Masar waxay Walaalaha Muslimiinta ku eedaysay afgembi oo jeelka u taxawday xubnihii ururka oo Sayid Qutub ku jiray. Toban gu’aad ayuu jeel liqay ka dib inta xarig qoorta loo suray kaw! Ceego looga siiyay. Saacaddii jeelka la geeyay ilaa saacaddii u dambeysay oo ceegada lagu dilay wuxuu ogsoonaa in mar un la dili doono oo hurdo iyo saamalayl gabay. In kasta oo lagu sameeyay jir-dil joogto ah oo jeellaydii qaar u geeryootay hadda na dhigaashii ayuu sii waday intii uu xirnaa waxaa na uu soo saaray qoraallo aad u wanaagsan, hayeeshee ka duulayay uur-mariidnimo garwaaqsan halaagga jeelka. Ma holin cid u doodday xuquuq aadmiyeed ama meel uu kulka qorraxda ka harsado iyo meel uu uga fakan karo maan-dilka iyo xanuunka. Ciqaabta jeelku waxay ku dirtay nolosha iyo wax wal ba oo qofku macaansado oo uu ku godobeeyey dhalanteed ka baxsan diinta Islaamka.
Dhiganeyaashii kala ahaa “Dhagaxdhigga” iyo “Harsashada Hooska Shareecada” ee caanbaxay ee Sayid Qutub ayaa waxay ku salaysnaayeen argaggaxii iyo anfariirta jeelka, wixii tiiraanyo iyo taah dhaawaca jirrabaadeed ayuu buugaagta ku shubay. Wax wal ba oo Quraan iyo Shareeco ka madaxbannaan ayuu qaaddacay oo figta sare waalli u fuulay. Halkii bilawgii uu weeraray barashada Quraanka keliya, kolkaan waxay dhaliishu si darandoorri ah ugu toosnayd dayacaadda Quraanka – dabcan nin geeri ka dhursugaa diin ayuu dugsadaa. Si aan la arag teer iyo waagii Ibnu Taymiyah iyo Cabdul Wahaab ee qarnigii 12naad iyo qarnigii 17naad ee seef-la-bood u jaanrogay dunida Muslimka ayuu tookada isu arkay wadaad weyne Islaamka u halgamayay. Dareenkii karkartay oo dhigaallada ka buuxay la na saluugay markii hore, markii dambe se kasbaday taageereyaal u arkay run tiigsimaad leh, ayaa qarsoodi ahaan faafay. Akhristeyaashii rumeeyay waxaa loogu yeeri jiray Qutubiisteyaal oo u dhignayd “waalaneyaal” maadaama ay bulshada ka beri noqon jireen. Buugaagtii se badi waxaa la daabacay imaatinkii ay Masar yimaadeen Sucuudiyiin maalqabeen ah oo la dhacay quruxda dhigaasha buugaagta. Soomaaliyi waxay u hanuunsan tahay oo durbaanka u tuntaa wixii Bariga Dhexe ka soo baxa oo keentay in sheeko Masri waalan laga soo minguuriyay oo Sucuudi soo martay ku soo hoortay oo isku gumaadaan dhoy la’aan maanta.
Hooggii Sayid Qutub himibiriiriyey geeri gocashada mooyaane, saddexda nin oo isku dayay dib-u-habaynta Islaamka (Taymiyah, Wahaab, iyo Qutub) ayaa waxay ka midaysnaayeen dabeecado ay bulshada ay ka gaar ahaayeen ay ku dhaleecayn jireen, taas oo ay la wadaageen aqoonyahannadii diimaha kale ee isku dayay tub hagaajiska. Taxanaha diimuhu dhankaas waa isaga mid oo muddo ba waxaa soo baxay rag ku dooday guubaabin diimeed oo ku soo biiriyay waxyaalo aan horay loo arag oo dabadeed dhaliyay kala irdhoow iyo dagaal laga qoomaameeyay. Waxaa raadadka diimaha ku caddaysan in marka diinu dagaal u bareerto gunaanad sunsumatay. Wadaaddo indho-indheeya dunida Muslimka ayaa hanaqaadka Qutubiisteyaasha sebankaan ku eedeeyay Juwish doonaya dabargoynta Islaamka, sidii Injiilka ee qarnigii 15naad markii ay u kala qaybsantay laamo isdiiddan oo ka dib sii hagaastay. Lama caddayn xigaasha Sayid Qutub ee Yuhuudda, eeddu se waa un tuhunkii caado ee Carabta iyo Yuhuudda, waxaa se soojireenka diimeed tibaaxay in diinta Islaamku marayso heerkii ay mareen diimihii ka horreeyay waagii ay da’daan jirsadeen. Kala qaybsanaanta dhalisay dagaallada oo dhiiggu meel wal ba waran yahay iyo aqoonta lagu kala tegay oo dunida Islaamku ka gaabisay ayay diimihii hore mareen oo aan Islaamka u gaar ahayn. Dadkii iyo diintii ayaa kala ilbaxay.
Diinu waxay ku baahdaa geyi aqoonyari iyo saboolnimo ku bahoobeen; taas ka-soo-horjeedkeeda, meesha aqoon iyo horrumar isku bahaystaan bay ku basbeeshaa. Afrikadii loo keenay diimaha ee loo bixiyey Micheal iyo Maxamed ee maanta ku dambeeya ee haatan Yurub u dira Baaderiyaal rogaal celin diin ugu faafiya Yurubta ka qaangaartay diimaha baa tusaaleeyey xaqiiqdaas. Geesta kale ismiidaamin iyo dagaal diimeed ayaa rigaaxay, qaabka Afrikadu diimaha sidii maandoorriyaha ugu sumowday ayaa yaab iyo amakaag ku reebay dadkii ugu horrayn u keenay (Carabta iyo Yurubiyaanka). Turufo nin nolosha nacay qoray ayay argaggixisada Al Shabaab hagardoomo ugu geysatay ummadda Soomaaliyeed, ficillada nolosha aadmiga liddiga ku ah ee kooxda ayaa dhammaantood ka dhibcay maskax waalli dillootay. Sayid Qutub waagii berya ba waxaa la yeeriyay magaciisa oo ilayska aroorta hore ilaa dhalandhoolka jirdil ayuu ku sugnaa. Habeenkii magaciisa ayuu qarwi jiray sidaas darteed na karaahiyaystay magaciisa (gundhigga magac-beddelaadda Al Shabaab), wuxuu cadaawad u qaaday aqoonyahannadii iyo suugaanyahannadii uu kasmada la wadaagay. Wax wal ba oo uu lahaa ama damacsanaa ayay Al-Shabaab ku dhaqantaa; magaca la beddelo (Abu Mansuur, Abu Amriki, Anu Muscab, Abu Subeer, iwm), dagaal aan dhammaad lahayn, socod aan dhammaad lahayn, soohdimaha la tirtiro si adduunka ay u qabsadaan, dawladdaha oo la wada afgembiyo, aqoonta oo la ciribtiro si qarnigii lixaad loogu laabto, waalli, siriq, burbur iyo baaba’. Dagaalka ay leeyihiin wuxuu socon doonaa teer iyo adduun gaddoonka ujeeddadiisu ma aha in uu joogsan doono haddii ay adduunka qabsadaan, taas micnaheedu waa in ayagu islayn doonaan ilaa dadka dunidu dhammaado.
Talowanaagnimo waxay tiri “i tus oo i taabsii”, Al Shabaab waxay dhoohaneyaasha ku beerlaxawsatay sheeko baraleey iyo nashiidooyin dagaal gelineed, Soomaali ay “qaala iyo qiila” madaxmartay na waa talo beel aan fiyoobayn oo dunida ka haray. Dhanka Soomaaliya waallidii Sayid Qutub waxay isu rogtay Diinta Axmed Godane, maadaama sheekada qof ba si u fasirto ayuu Axmed Godane soo saaray amar-ku-taaglayn gaalaysiisay qofka awaamiirtiisa diida. Masaakiinta lagu maskax dilay beenta, sida in hawada Soomaaliya dul heehaabaan Xuural Cayn sugaya inta ay dhimad haleelayaan, ma moojaan Axmed Godane bay iilka u aadaan. Saynisyahannada maskaxshiilka ayaa cilmi baaray maskaxda xagjirka oo isku dubbariday culuum dheellitiran oo caddeeyay waxyeellada ay leedahay, nasiibwanaag se halkii ay wada mareen ayay kooxda Al Shabaab maraysaa gunaanad ahaan.
Other Interesting posts:Xildhibaanad Somalia oo kadeyriyay xaalka barakaca...BREAKING NEWS.. Waziirka K.X arimaha dibada Kenya ...How a former council official from west London has...Farah — carrying Britain’s hopes Ganacsato lagu dilay South Africa Somalia: The Consequence of a Cooked ConstitutionWarsaxaafadeed - Shirkii Golaha WasiiradaMadaxweyne Geelle 'Waan garab taaganahay walaalehe...NUSOJ oo cambaareysay dilkii weriye XareedMuusanowga Sahal iyo Marmarsiinyaha PuntlandSomali PM condemns Galkayo bombing, pledges nation...Banaanbax kadhan ah dilalka Soomaalida ee Koonfur ...Socialize	Posted by QOL Admin on October 28, 2013. Filed under Warka Maanta.
You can leave a response or trackback to this entry	4 Responses to Al Shabaab: Waallidii Sayid Qutub	Cartan October 29, 2013 - 8:26 pm	sayid qutub in uu waalnaa waxaa ka masuul ah dilkii lagu hayay waxaana caddeeyey inta raacday waallidiisii iyo burburkii iyo dagaalkii ay wahaaabiyiintii uu duudsaday ka iibiyay
Reply	Falsan October 30, 2013 - 1:06 pm	Waan ka xumahay in qof afkiisa ka yirahdo waxuusan hubaal ka heyn. Ma arkin qof wax ka qoray Sayid Qudubi, muslim & gaal, oo tilmaamay in Sayid Qudbi waalnaa! Nabiyada Allaah waxaa lagu sheegi jiray inay waalli qabaan, qofkii doona inuu jidkood xaga dacwada raaco waxaa lagu sheegaa inuu waalanyahay uu jini ku dhacay. Waa sidaas oo kale waxa aad sheegeysaan
Sayid Qudubi iyo wahaabiya isku fakar ma ah. Shabaabka Soomaaliya jooga iyo salafiyada aad ka hadleyso iyo Alqaacida guud midnaba ma jecla sida uu Sayid Qudub iyo Akhwaanku u shaqyaan ama Islaamka u faafiyaan
Reply	Falsan October 29, 2013 - 11:37 am	Waxaad la baxday Mahad kooshin, ma hub in magacu yahay mid dhab ah oo dadku kuu yaqaan. lakiin adgoo rayigaaga xur ah ayaad beenaale iyo u egtahay qof naceeb u qaba diinta Islaamka.
Sayid Qutubi waa shaqsi, waxbaa ka qaldami kara lakiin waxuu ahaa caalim isagoo aqoon u le si geesinmo ah ula dagaalamay fakarka shuuciyadda iyo cadaalad darida nidaamka capitalismka ee reer galbeedka.
Waxaa kale oo aad Kooshinow kaa qaldan sida aad u aragto guud ahaan diimaha iyo ilbaxnimada oo aad dooneyso inaad kala saarto. Aqoontaada taariikhda waa mid gaaban, gaar ahaan marka aad ka hadleyso dadyowgii iyo dalmareenadii soo gaaray Soomaaliya oo la ogsoonyahay inay isgu jirto been badan iyo xaqiiqo yar oo leysku qasay. Adiga Kooshin ahna ay si buuxda kaaga qasantahay
Reply	Falsan October 28, 2013 - 7:12 pm	Waxaa kugu waajibay inta aadan wax ka sheegin Sayid Qudub bal inaad wax ka ogaato aqoonta caalimka weyn ee culimada muslimiinta oo dhan ay la dheceen tafsiirkiisa Qur’aanka Kariimka, laguna tilmaamay inuu ahaa tafsiir ku haboon qarnigii 20aad
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> FInd us on Facebook	Wararkii Ugu Danbeeyay	Posts